रक्त सेवाले तीनहजार लाभान्वितः विपन्न रक्त सहायता कोष स्थापना
२०७८ असार २४, बिहीबार ०७:३३
बर्दिबास : महोत्तरीको बर्दिबासस्थित रक्त सञ्चार केन्द्रको सेवाबाट करिब तीन हजार सेवाग्राहीले नयाँ जीवन पाएका छन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बर्दिबास उपशाखाले सञ्चालन गरेको केन्द्रबाट २०७२ सालयता दुई हजार ९१३ जनाले रक्त सेवा लिएर नयाँ जीवन पाएका हुन् । केन्द्र रेडक्रस बर्दिबास उपशाखाले २०७२ हिउँदमा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
केन्द्र सञ्चालन भएयताको हालसम्मको अवधिमा तीन हजार १६९ जनाले रक्तदान गरेका रेडक्रस बर्दिबास उपशाखाको अभिलेखमा उल्लेख छ । यसमध्ये दुई हजार ९१३ पोका रगत बिरामीको उपचारमा प्रयोग भएको हो । बाँकी २५६ पोका रगत लामो समय भण्डारण गर्न नमिल्ने हुँदा म्याद नाघेपछि नष्ट गरिएको रेडक्रस बर्दिबास उपशाखाका सभापति मुकुन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बर्दिबास-३ गौरीडाँडामा प्रयोगशाला र ल्यावसहितको एकतले भवन निर्माण गरी रेडक्रस बर्दिबास शाखाले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
बर्दिबासमा रक्त सञ्चार केन्द्रको सञ्चालनले यस भेगका गरिब वर्गका सर्वसाधारण आकष्मिक उपचार सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । बर्दिबासमा सञ्चालित अस्पतालमा तत्काल बिरामीलाई रगतको आवश्यकता पुरा गर्न केन्द्रको सेवाले सहज भएको बर्दिबास अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. सुनिलकुमार दाहाले बताउनुभयो ।
“उपचारमा रगतको आवश्यकता पर्ने बिरामीका लागि केन्द्रबाट तत्काल रगतको आवश्यकता पुरा हुने गरेको छ” डा. दाहाले भन्नुभयो, “खासगरी रक्तअल्पता भएका गर्भवती महिला, सुत्केरी हुने बेलाका र भएका महिला तथा दुर्घटनामा परेका बिरामीको उपचारमा तत्काल आवश्यकताअनुसारको रगत पाइएपछि सहज भएको छ ।”
केन्द्रको १०० पोका (पिन्ट) रक्त भण्डारणको क्षमता छ । बर्दिबासमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालले रगतको आवश्यकताको माग गर्नासाथ रगत दिने गरिएको रेडक्रस बर्दिबास उपशाखाले जनाएको छ । “हामीले रक्तदानका लागि जनसमुदायलाई अभिप्रेरित गर्नदेखि केन्द्रको व्यवस्थापनसम्मको चाँजो मिलाएका छौं” उपशाखाका सभापति पौडेलले भन्नुभयो, “महामारी र खासखास सङ्कटका बेला बिभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाको समन्वयमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजन गरिन्छ ।” समुदायले हरदम सहयोग गरी रहेको हुँदा केन्द्र सञ्चालनमा सहज भएको पौडेलको अनुभूति छ ।
भर्खरै उपशाखाले अति विपन्न, क्यान्सरका दिर्घरोगी, यौन हिंंशा पीडित, बेवारिसे बिरामी, किड्नी (मिर्गौला)को डायलासिस गरी रहनु पर्ने र दुर्घटनामा परेकालाई रगत आवश्यकताको परिपूर्ति सेवाशुल्करहित प्रदान गर्न ने रे सो विपन्न रक्त सहायता कोषकोे स्थापनासमेत गरेको छ । बिभिन्न सङ्घसंस्था तथा व्यक्ति व्यक्तित्वको सहयोगबाट पाँच लाख रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरेर त्यसको ब्याजबाट यो सेवा प्रदान गर्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित कोष सञ्चालक समिति गठन गरिएको सभापति पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यसबाहेक बाढी, आगलागी, महाव्याधि र बिभिन्न प्रकृतिका विपद्मा परेकालाई रेडक्रस उपशाखाले आपतकालीन राहत उद्धारको सहयोग गर्दै आएको छ ।
बर्दिबासमा सञ्चालित रक्त सञ्चार केन्द्र र पछिल्लो समयमा स्थापित विपन्न रक्त सहायता कोषबारे समुदायमा बढेको सकारात्मक चासोले सहयोगी हात बढ्दै गएका छन् । रेडक्रस बर्दिबास उपशाखाले केन्द्रको सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन थप भौतिक संसाधन जुटाउन पहलकदमी गरी रहिएको जनाएको छ । रेडक्रस बर्दिबास उपशाखामा एक विशिष्ट र १३९ जना आजिवनसहित १४० सदस्य छन् ।